२८ असोज, काठमाडौं । परीक्षा स्थगित भएको सात महिनासम्म कुनै निर्णय नहुँदा कक्षा १२ अध्ययनरत करिब साढे चार लाख विद्यार्थी अन्योलमा छन् । सरकारको ठोस निर्णय नआउँदा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अधिकारी पनि अन्योलमा देखिन्छन् ।
कक्षा १२ को परीक्षा नहुँदा विद्यालय तह पूरा गरेर विश्वविद्यालय प्रवेशको ढोका खुलेको छैन । विश्वविद्यालयहरूले स्नातक पहिलो वर्षको भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्न पाएका छैनन् । कक्षा १२ को परीक्षाबारे सरकारबाट निर्णयको प्रतीक्षामा रहेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेलले बताए ।
केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद्ले सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर परीक्षा सञ्चालनका लागि बाटो खोलेको थियो । तर, लाखौँ विद्यार्थी सहभागी हुने भएकाले शिक्षा मन्त्रालय र बोर्ड छुट्टै निर्णयको पर्खाइमा छन् । बोर्डले अध्ययनपछि परीक्षा विकल्प सुझाउँदै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
कोरोना संकटका कारण स्थगित एसइईको आन्तरिक मूल्यांकन भएर नतिजासमेत आइसकेको छ । यस्तै, कक्षा ११ मा विद्यालयले आन्तरिक परीक्षा लिएर ग्रेटसिट दिने निर्णय भएको छ ।
कक्षा १२ को परीक्षा विद्यालय तहको अन्तिम भएकाले विश्वसनीय बनाउन पनि धेरै विकल्पमा छलफल भएको बोर्डका पदाधिकारीको भनाइ छ । कक्षा ११ र १२ मा करिब नौ लाख ६४ हजारले परीक्षा फारम भरेका थिए । कक्षा १२ मा चार लाख ३१ हजारभन्दा बढी परीक्षार्थी छन् ।
कोरोना जोखिम लामो समय रहने देखिएपछि बोर्डले कक्षा १२ को स्थगित परीक्षा सञ्चालन गर्न सरकारलाई विभिन्न विकल्प सुझाएको छ । त्यसमा चरणबद्ध परीक्षा सञ्चालन गर्ने पद्धतिलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
यस्तै, ओपन बुक पद्धति अपनाउने, त्यसमा पनि कक्षा ११ को नतिजालाई केही आधार मान्ने गरी परीक्षा लिने, अनलाइनबाट प्रश्न पठाएर विद्यालयले परीक्षा लिने विकल्प पनि सुझाइएको छ ।
कोरोना जोखिम कम देखिएका जिल्लाबाट परीक्षा सुरु गरी धेरै विद्यार्थी भएका विद्यालयसम्म पुग्ने प्रस्तावलाई बोर्ड सचिवालयले बढी प्राथमिकता दिएको छ । ओपन बुक प्रणालीमा विद्यार्थीलाई इमेलमार्फत प्रश्नपत्र पठाइन्छ र घरमै बसेर लेखेको उत्तरपुस्तिका विद्यालयमा बुझाउनु पर्छ ।
यस्तै, अनलाइनबाट प्रश्न पठाएर विद्यालयबाट परीक्षा लिन अर्को सुझाब दिइएको छ । विद्यालयमै परीक्षा लिँदा पनि भिड हुने भएकाले यो विकल्पमा पनि मतैक्यता छैन । अहिले धेरै विद्यार्थीसँग इन्टरनेटको सुविधा नभएको र भएकाहरूसँग पनि गुणस्तरीय सेवा नभएकाले अनलाइन प्रणालीको परीक्षालाई त्यति धेरै प्राथमिकता दिइएको छैन ।
पहिलो चरणमा हिमाली जिल्ला
बोर्डले परीक्षाका लागि तीन चरणको योजना बनाएको छ । हिमाली जिल्ला र ५० भन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालयमा पहिलो चरणमा परीक्षा गर्न सकिने बोर्डको भनाइ छ । दोस्रो चरणमा दुई सयभन्दा कम कोरोना संक्रमित भएका जिल्ला र एक सयदेखि दुई सय विद्यार्थी भएका विद्यालयमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने योजना छ ।
तेस्रो चरणमा दुई सयभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालय पर्नेछन् । त्यस्ता विद्यालय कम छन् । प्रश्नपत्र, उत्तरपुस्तिका तयारी अवस्थामै रहेकाले पहिलो चरणको परीक्षा सञ्चालन गर्न कठिन नरहेको पदाधिकारीको भनाइ छ । विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थी कहाँ र कुन अवस्थामा छन् भन्ने पहिचान गरिसकेका छन् ।
विश्वविद्यालयमा पनि परीक्षाको तयारी
विद्यार्थीको धेरै चाप रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि परीक्षाको तयारी गरिरहेको छ । लामो समयदेखि स्थगित भएका परीक्षा सञ्चालनको प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
त्रिविका शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. शिवलाल भुसालले जसले जसरी परीक्षा लिन सक्छ, त्यसैगरी अघि बढ्ने निर्णय गरिएको बताए । केही अध्ययन संस्थानले पनि परीक्षाको तयारी गरेका छन् । धेरै विद्यार्थी भएका परीक्षा छठपछि सञ्चालन हुने भुसालले बताए । अन्य विश्वविद्यालय पनि परीक्षा सञ्चालनको तयारीमा छन् । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा भवानीश्वर गाैतमले लेखेका छन् ।
अस्पताल लग्दै गर्दा कोरोना संक्रमितको बाटोमै मृत्यु
ताप्लेजुङमा एकै परिवारका ३ जनामा धारिलो हतियार प्रहार
निर्माण उपकरणमा आगजनी गर्नेलाई कारवाही माग
कोरोना संक्रमित भएपछि गाउँलेद्वारा लखेटिए ७० वर्षीय वृद्ध
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत १५ हजारभन्दा बढीलाई रोजगार
२०७८ साउन १४ गते बिहिवार